FAMPIANARANA SORATRA MASINA ALAKAMISY 20 JANOARY 2011
"IZA MARINA MOA NY ANDRIAMANITRA INOAN'NY KRISTIANA?"
Sarotra dia sarotra ny lohateny izay raisintsika satria fianarana momba an’Andriamanitra. Izy izay tsy hita maso, manana ny maha-Izy Azy izay tsy takatry ny saina sy ny fahalalàna, tsy azo refesina na lanjaina, na anaovana fanandramana toy ny amin’ny Siansa (Rom 11:33-36).
Araka izany, ny fahalalàna Azy dia tsy amin’ny fahalalàna sy ny fianarana ihany, fa amin’ny finoana indrindra indrindra. Izany hoe, ny finoana Azy, ny fenekena hiaraka aminy sy hifandray aminy no ahafantarana Azy bebe kokoa. Ny tsy mino, araka izany dia tsy ahafantatra an’Andriamanitra sy ny momba Azy na oviana na oviana. Izy ihany mantsy no manambara ny Tenany, sy ny maha-Izy Azy ary ny toetrany rehetra amin’ny olona izay vonona hifandray sy hiaraka Aminy.
Araka ny voalaza tery aloha, dia Andriamanitra manmbara ny Tenany Izy! Tsy nisy mihitsy na iray aza nahalala ny momba Aazy raha tsy Izy no niseho sy nampahafantatra izany tamin’ny olona izay nofidiany.
Noho izany indrindra, nifidy firenena iray Andriamanitra mba hisehoany sy hitenenany ary hanaporofoany ny maha-Izy Azy, ny asany, ny toetrany ary ny fikasàny sy ny sitrapony amin’ny Zanak’olombelona. Tsy iza io firenena io fa Isiraely, izay firenena kely iray ao anatin’ny maro, tsy toy inona akory manoloana ny firenena maro, nefa niantefan’ny safidin’Andriamanitra.
Ny fitsofohan’Andriamanitra tao amin’io firenena io sy izay nataony rehetra teo amin’ny zanak’olombelona, no voatantara ao amin’ny boky iray atao hoe Baiboly. Na tiana na tsy tiana, ny Kristiana dia mivavaka amin’Andriamanitr’Isiraely, izay tsy hafa fa Andriamanitry ny Baiboly.
II- NY ANDRIAMANITR’ISIRAELY
Ny firenena rehetra dia samy manana ny andriamanitra izay nivavahany, indrindra talohan’ny nitsofohan’Andriamanitra teo amin’ny tantaran’ny firenen’Isiraely. Marobe ny anaran’andriamanitra hafa voalaza ao amin’ny Baiboly toa an’I Astarta, Bala, Bala-Zeboba, sns…Satria ny firenen’Isiraely voahodidin’ny firenena jentilisa izay mbola tsy nahafantatra marina Ilay tena Andriamanitra, dia nampahafantarin’Andriamanitra tamin’io firenena io ny momba Azy rehetra: ny anarany, ny maha-Izy Azy, ny toetrany, ny asany, ny fikasàny, ny didiny sy ny lalàny.
1) Ny anarany:
Tao amin’ny fivavahana jiosy na “judaisme”, ny anarana lehibe indrindra iantsoana an’Andriamanitra dia ny hoe “JEHOVAH”. Amin’ny teny hebreo dia litera 4 ihany, izay renintsoratra avokoa no dikan’ny anarana izany hoe YHWH NA YAVEH (Youd-Heh-Waw-Heh) amin’ny teny katolika no tena manakaiky indrindra ny fototra hebreo amin’io anarana io. Avy aiza no niavian’izany YHWH izany? Ny mpandinika iray dia nilaza fa avy amin’ny teny ao amin’ny faran’ny Gen 1 sy fiandohan’ny Gen 2 amin’ny teny hebreo izany: Yom Hashishi Vaykhoulou Hashamaïm (Ny andro fahenina. Dia vita ny lanitra sy ny tany). Inona marina ary ny hevitry anarana hoe YHWH na Yaveh na Jehova). Ady hevitra be ihany anefa ny amin’ny fanononana marina ny anaran’Andriamanitra, satria noho ny anaran’Andriamanitra masina, dia tsy sahy notononina akory izany fa nosoloana hoe “TOMPO” na “ADONAI”.
Raha nanontany an’Andriamanitra I Mosesy mpanompony, hoe Iza moa ny anaranao, dia namaly izy hoe: “Izaho Ilay izy hatrizay ary ho mandrakizay” (Ex 3:14). Mifanaraka tsara amin’ny hevitry ny teny hoe IAVEH na JEHOVAH izany izay midika ho “Izy dia taloha, ankehitriny, ho avy=mandrakizay”. Manambara fahavelomana mandrakizay ary tsy fiankinana na amin’iza na amin’iza izany afa-tsy amin’ny tenany ihany. Manana lanja lehibe amin’ny anaran’Andriamanitra araka izany ny fahavelomana. Velona ny Andriamanitr’Isiraely, tsy tahaka ny olombelona akory, fa fahavelomana tsy vofaritra na voafetra, manana ny mampiavaka azy indrindra manoloana ny andriamanitry ny jentilisa izay andriamanitra maty sady tsy manan’aina. Raha fintinina, Andriamanitra velona ny Andriamanitry ny Baiboly sady loharanon’ny fiainana rahateo sady mihazona ny fiainana.
Ny anarana hoe JEHOVAH dia tsy azo notononina na oviana na oviana, afa-tsy indray mandeha isan-taona ihany, amin’ny andro fanavotana, ary ny mpisoronabe irery ihany no mahazo manonona izany.
Rehefa rava ny Tempoly dia tsy azo notoninina intsony ny anarana JEHOVAH. Nosoloina hoe ADONAI na TOMPO izany. Pluriel io anarana hoe Adonai io, entina ilazàna fa Izy irery ihany no Tompo manoloana ny andriamanitra rehetra. Ny anarana hoe “adoni” singulier dia entina milaza ny andriamanitra fenisianina “Tamoza”, ary niavian’ny hoe “adonis” amin’ny grika.
2) Ny maha-Izy Azy:
- Andriamanitra tokana: Ny Andriamanitry ny Baiboly dia Izy irery ihany no Andriamanitra tokana sady marina (Isaia 45:5), manafoana ny hevitr’olombelona rehetra ny moban’ny fisian’ny andriamanitra maro. Mifanohitra amin’izay eritreretintsika anefa, miseho amin’ny “personnes” telo samihafa izy dia ny “trinité” na ny maha-Ray, Zanaka ary Fanahy Masina.
- Andriamanitra mpahary: Ao amin’ny Gen 1: 1 izay ahitana ny hoe: “Tamin’ny voalohany Andriamanotra nahary ny lanitra sy ny tany” dia azo anatsoahana tsotra ny momba an’Andriamanitra. Izy no voalohany, Izy Ilay hatrizay hatrizay. Izy koa no namorona ny zavatra rehetra. Ny Gen 1:1 izay dia milaza hoe iza moa Izy ary inona no nataony. Mampiseho izany fa Andriamanitra dia lehibe sy mahatalanjona ary isika sy ny voahary izay nataony dia kely dia kely
- Andriamanitra dia manana ny toetran’olombelona: Na dia milaza aza ny Jaona 5:24 fa “Andriamanitra dia Fanahy”, manana ny toetra rehetra maha-olona Izy, mba hahafahany mifabndray amin’ny olombelona: mieritreritra, misafidy, manana ny sitrapony sy izay heveriny, miasa, malahelo, tezitra, mitomany, faly…Ananany daholo ny toetran’olombelona hanehoany fa manakaiky antsuka Izy ary tia antsika.
- Andriamanitra dia manana ny anarana iantsoana Azy: Araka ny hitantsika tery ambony dia ny anarana hoe JEHOVAH no nahafantarana Azy. Masina loatra sady ambony anefa izany ana’rana izany ka nosoloana hoe Tompo. Aty amin’ny Testamenta Vaovao, dia ambaran’I Jesosy imbetsaka fa io Andriamanitra io dia Ray: sady Rain’I Jesosy Kristy no Raintsika. “Miakatra ho any amin’ny Raiko sy ny Rainareo Aho ary any amin’Andriamanitro sy Andriamanitrareo”, hoy Jesosy! (Jaona 20:17). Maneho ny fifandraisana akaiky amin’Andriamanitra sady Kristy izany, ary amanamarina izany ny Tenin’ny Tompop fa “Izaho sy ny Ray dia iray ihany”, izay nahita Ahy dia nahita ny Ray (Jao 10:30; 14:9). Raha tsorina izany, dia marina tanteraka ao amin’ny Filazantsara ny fanambaràna nataon’I Tomasy nilazàna an’I Jesosy hoe “Tompoko sy Andriamanitro” (Jao 20:28). Ny Epistily koa dia manamafy izany ary milaza an’I Jesosy Kristy ho Andriamanitra:”Izy no Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay”(I Jao 5:20).
- Ny maha-Izy Azy iavahany amin’ny hafa rehetra: Andriamanitra mandrakizay Izy (eternel), manerana an’izao rehetra izao Izy (omniprésent), mahalala ny zavatra rehetra (omniscient), manana ny hery sy ny fahefàna rehetra (omnipotent), tsy voa fetra(infini), tsy miova (immuable), masina, marina ary fitiavana Izy.
- Andriamanitra dia Mpamonjy:
Ÿ Ilay Andriamanitra Ray dia nihevitra ny famonjena antsika ka naniraka ny zanany lahitokana hanatanteraka izany (Jao 3: 16).
Ÿ Nanefa izany Iraka ho famonjena antsika izany Jesosy Kristy (Mat 1:21)
Ÿ Ny Fanahy Masina kosa no manangana antsika sy manavao ary mihazona antsika ho amin’izany famonjena izany ( Tit 3:5).
Ny Mpitandrina RANDRIANARISOA Jean Aimé
1. christian | 19/04/2011
salut, misaotra betsaka t@ fampianarana fa ny tiako hanontaniana dia ny hoe: mba porofoy amiko ny hoe tsy azo tononina ny teny hoe JEHOVAH raha tsy indray mandeha isa taona dia @ andro fanavotana, misaotra mialoha @ valiteny